Gaa na Haninge - Ihe omume na ihe ị ga -eme na Haninge
Banye / Deba aha
Banyere nleta haninge
Maka ndị otu
Nzukọ kwa afọ
Ị nweghị mmemme na listi a.
Chọpụta haninge Facebook
ihe omume na -abịa
Gosi ihe niile
Ebe ị ga -eleta
Netwọk eserese na Frönäs, Gålö 28 Mee n'elekere iri na otu nke ụtụtụ
Hụ, mee na ahụmịhe
Naturpasset na Cykelpasset - Ọ pụta na okike ma gbalịa nhazigharị
Mụta ịkwọ ụgbọ mmiri na Dalarö
Ụlọ ahịa na ịzụ ahịa
Igbe anụ nwere anụ ahịhịa ata sitere na ugbo Tyresta
Ulo na ulo
Winn Hotel dị mma - Nọrọ abalị na nso mpaghara ọmarịcha Rudan
Akwụkwọ ntuziaka na Tyresta - Ọnwụ dị ndụ n'ime oke ọhịa
Hụ & Mee
Na Haninge enwere ọtụtụ ebe azụmaahịa. Nnukwu ụlọ ahịa, Haninge center, nwere ọtụtụ ụlọ ahịa. Ọzọ bụ Port 73 n'ọnụ ụzọ Haninge ya na i.a. Coop Forum na ụlọ ahịa nwere ụdị ama ama. Nkume okwute enwere ọtụtụ ụlọ ahịa ngalaba dịka ICA MAXI wdg. Obere ụlọ ahịa dị na Västerhaninge na Brandbergen.
N'ọgwụgwụ nke oke oke osimiri bụ Huvudskär Archipelago na ọ bụ otu n'ime ihe okike eke Haninge. Enwere agwaetiti 200, cobs na skerries. Na Ålandsskär, obodo ịkụ azụ sitere na emepechabeghị emepe, enwere ụlọ. Tullhuset bụ ụlọ mbikọ taa, n'ụlọ ọkwọ ụgbọ elu enwere ihe ngosi gbasara akụkọ Huvudskär. Site na ụlọ mposi ị nwere ọmarịcha echiche. Ntọala Archipelago na -elekọta agwaetiti ahụ na ụlọ mbikọ. Waxholmsbolaget na -arụ ọrụ Huvudskär site na Fjärdlång site na Dalarö ụbọchị atọ n'izu T / R n'oge ọkọchị.
Ebe ụlọikwuu Utö dị
Na Utö enwere otu n'ime ogige mara mma nke agwaetiti. N'akụkụ oke osimiri, nwere ọmarịcha echiche nke ọdụ ụgbọ mmiri ndịda na Mysingen - yana oke osimiri nwere aja nke dị n'akụkụ ogige ahụ! Ebe a mara ụlọikwuu nwere ụlọ ọrụ nwere ụlọ mposi, ịsa ahụ na obere oghere nwere efere ọkụ. Ebe a mara ụlọikwuu bụ ihe atụ dị n'èzí yana enweghị ọnụ ọgụgụ, yabụ na ọ dịghị mkpa ka ndị mmadụ debe ebe. Klas ụlọ akwụkwọ na otu buru ibu, n'aka nke ọzọ, kwesịrị ịde akwụkwọ tupu oge eruo. Maka ntinye akwụkwọ na ozi kpọtụrụ Hamnboden na ekwentị: 08-501 57 450
Na Castle Häringe ị nwere ike ibi ndụ dị ka eze. Ma ọ bụ gịnị kpatara na ọ bụghị dị ka kpakpando ihe nkiri n'ime ụlọ otu Greta Garbo, na mbụ site na 1930. Ime ụlọ nkwari akụ ahụ dị gburugburu nnukwu ụlọ na n'ọtụtụ dị iche iche; ihe niile site na otu ọnụ ụlọ ruo na ọmarịcha ụlọ na ime ụlọ. Ịnwekwara ike ibi iche iche n'ụlọ nke gị nwere ogige nke ya, nnukwu ụlọ ịsa ahụ yana kichin zuru oke. Häringe mara mma nke ukwuu yana nkeji iri abụọ na ise n'ebe ndịda Stockholm. N'ebe a, nnukwu obodo ahụ na -enwe mmetụta dị anya mgbe ị na -agafe nnukwu ala, n'ọnụ ụzọ agwaetiti na nnukwu ndoputa okike. N'ebe a ọ dị mfe ịnụ ụtọ na izu ike.
Obere mmiri ara ehi dị na mpaghara Österhaninge, na ndịda Stockholm. Anyị na-emepụta chiiz ndị ọrụ aka n'ụdị dị iche iche, sitere na ezigbo chiiz chiiz ruo chiiz putty siri ike. A na -ewepụta aha chiiz ndị ahụ na Haninge - Tyresta, Vendelsö, Åva na ndị ọzọ. Mmiri ara ehi anyị na -eme na -esite na ehi na ugbo Stegsholm na Gålö. Anyị nwere ụlọ ahịa ugbo na -emeghe n'afọ niile. Lelee weebụsaịtị maka oge ugbu a.
Nzọ Nordic na -ahazi njem ịgba ịnyịnya na njem mkpagharị na agwaetiti Stockholm nke na -enye gị ozi niile ịchọrọ iji nwee ike iji ezumike na -arụ ọrụ n'onwe gị na agwaetiti mara mma, dị jụụ na pụrụ iche.
Café Tyresta nke
Emi odude ke Tyresta National Park. N'ime ebe a na -eme bred ụlọ anyị, anyị na -eji ihe ndị sitere na nri eme achịcha. Tea na kọfị anyị bụkwa ahịa azụmaahịa / mma. Anyị na -ahụ na onye ọ bụla nwere ike iso anyị rie ma soro anyị rie kọfị, yabụ anyị nwere ike ịnye gị ihe anaghị eri anụ, vegan, lactose ma ọ bụ ndị na -adịghị anabata gluten. Nabata anyị chọrọ Lena na ndị ọrụ. Anyị na -emeghe n'afọ niile ma nwee ọdịdị gburugburu akuku!
N'ime ụlọ ọrụ ochie na -egwupụta akụ, enwere mmanya Utö Värdshus na ụlọ iri nri nke nwere ikuku mmiri na ebe obibi. N'ebe a ị nwere ike iri la carte ma nri ehihie na nri abalị wee drinkụọ ihe niile site na kọfị ruo champeenu. N'oge ọkọchị, veranda na -acha anwụ na -acha na -emeghe site n'ụtụtụ ruo mgbede na n'oge oyi mgbe ntu oyi belatara, ị nwere ike were chocolate dị ọkụ ma ọ bụ mmanya gbara ọkụ n'ihu ọkụ na -ere ọkụ n'akụkụ.
Muskö dị na agwaetiti ndịda Haninge, yana Hårsfjärden n'akụkụ ọdịda anyanwụ yana nnukwu mmiri Mysingen nke dị n'èzí chere ihu n'oké osimiri. N'ebe a, ndị agha mmiri nke Sweden nwere isi ntọala ya site na narị afọ nke 1500 ruo 1967. Nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri nke nwere nnukwu mpaghara dịka Old Town na Stockholm na -agbawa n'oké nkume. N'ime afọ 1960, e wuru ọwara n'etiti Muskö na ala. Ọwa ụgbọ ala a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 3 n'ogologo yana ọ na -agbada ruo mita 66 n'okpuru ọnụ mmiri. Na Muskö enwere nnukwu ụlọ abụọ sitere na narị afọ nke 1700, Arbottna na Ludvigsberg.
N'ime ọmarịcha agwaetiti, Almåsa na -enye ụlọ n'otu ọnụ ụlọ ma ọ bụ okpukpu abụọ - ha niile nwere mbara ihu ma ọ bụ patio, ọtụtụ nwere echiche osimiri. Enwere ike iwere nri abalị n'ụlọ manor ma ọ bụ buru ụzọ debe nri abalị pụrụ iche na Svartkrogen (a ga-eburịrị akwụkwọ tupu ụbọchị Satọdee), Almåsa na-enye nnukwu ihe omume n'afọ niile, maka otu na ọgbakọ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga -achọpụta n'ime na gburugburu Almåsa. Anyị na -akwado ịga ije na okike, na -eme ka mmiri na -asọba n'oké osimiri site n'ụsọ osimiri aja na oghere.
Dalarö akụkọ ihe mere eme
E hiwere Dalarö na 1636 ma kemgbe ọtụtụ afọ abụrụla kọstọm na ọdụ ụgbọelu, azụmaahịa na ọdụ ụgbọ mmiri. Na narị afọ nke iri na iteghete, Dalarö ghọrọ ebe ọha mmadụ na -aga ma taa bụ ezumike ezumike mara mma, mana ọ bụkwa isi ihe dị mkpa maka oyiri na ọnụ ụzọ agwaetiti ndịda. Strindberg kpọrọ Dalarö ọnụ ụzọ ámá nke paradaịs. N'ala mmiri nke Dalarö bụ mkpọmkpọ ụgbọ mmiri echekwara kacha mma n'ụwa site na narị afọ nke 1800. Ị chọrọ ịhụ ha ma mara karịa? Anyị na -ahazi nleta eduzi na njem ụgbọ mmiri maka obere ma ọ bụ buru ibu karịa n'afọ niile. Kpọọ 1600 - 08 501 508 ma ọ bụ ozi -e info@dalaro.se
Ụlọ oriri na ọullụ &ụ Tullhuset
Anyị na -enye nri na ihe ọ drinksụ withụ na -elekwasị anya na ihe ọkụkụ wee họrọ ngwa nri dabere na nnweta yana ihe kacha mma oge ọ bụla ga -enye. N'ime oge ọkọchị, anyị na -emeghe 12.00 - 22.00 kwa ụbọchị. N'oge oyi, anyị na -ejere Dagens Lunch Mon -Fraị 10.30 - 14.00. Anyị na-emeghekwa na Fraịde na Satọde 16.00-22.00. Soro anyị gbaa akwụkwọ agbamakwụkwọ, baptizim ma ọ bụ olili ozu. Na nri. Tel. 08-501 501 22 Nnọọ nnabata!
Ụlọ nkwari akụ Ekuddens
Ekudden bụ ebe maka gị ịhazi ogige, ọmụmụ ihe, ọgbakọ ma ọ bụ mmemme nkeonwe. Esi nri nke gị na nnukwu kichin anyị mara mma, nye iwu nri site n'ugbo ndị agbata obi anyị ka ọ ga -amasị gị ka onye isi nri gị bịa sie nri gị na saịtị? Site na anyị, ọ dị mfe ịde akwụkwọ na ime nnọkọ n'okwu gị. Site na mpaghara ebe a na -eri anụ, sauna, osimiri aja, jetty na pitch bọọlụ, ọ dị mfe ibi na ito eto. Ma eleghị anya, ọ bụ ya mere ndị ọbịa anyị ji alaghachi kwa afọ! Anyị na -enye nhọrọ dịka nhicha yana akwa na akwa nhicha maka ntinye akwụkwọ gị. Werekwa ohere were mee akwụkwọ ịsa ahụ anyị na -ewu ewu! Anyị na -enyere aka
Akpa akpa Utö
Ebe ikuku dị elu karịa masts n'ọdụ ụgbọ mmiri, Bakfickan bụ kaadị nchekwa maka ndị agụụ egwu na -agụ, oriri na ọ companyụ andụ na ụlọ ọrụ na -atọ ụtọ. Bakfickan na-emeghe na Satọde site na Valborgsmässoafton ruo ngwụsị izu mbụ na Ọktọba na Wenezde-Sat n'oge oke ọkọchị, na-emeghe elekere 22-03.
Nwee ezigbo nri na ọdịdị agwaetiti mara mma, gbazite igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ jee ije n'oké osimiri. Ime ụlọ nkwari akụ anyị dị na ụlọ dị iche iche, nke sitere na mgbe ochie dị ka ebe a na -eme n'oké osimiri, mana ugbu a, ụlọ nkwari akụ ọgbara ọhụrụ na arụzigharị nwere ịsa ahụ, WC, ekwentị na TV. Ime ụlọ ndị ahụ na -ekpo ọkụ ma na -atọ ụtọ, ejirikwa nlezianya họrọ ihe ndozi iji mejupụta ọdịdị agwaetiti mara mma. Debe ngwugwu anyị dị ọnụ ala yana nri na ihe omume emebere maka oge opupu ihe ubi, ọkọchị na ụbịa ma ọ bụ n'ezie tebụl ekeresimesi na ahịa ekeresimesi Utö na Disemba. N'elu ugwu dị n'akụkụ Värdshuset bụ ụlọ mbikọ Skärgården nke nwere
Ugbo ezinụlọ dị ndụ, 1km n'ime Gålö. N'ime ezigbo ebe a na -akụ osisi, kafiọ ugbo anyị na ụlọ ahịa ugbo, ebe anyị na -ere anụ sitere na anụmanụ anyị, anụ ehi na atụrụ. Anyị na -erekwa chiiz sitere na mmiri ara anyị yana azụ, mmanụ a etc.ụ na ndị agbata obi anyị. Afọ niile, a na-anabata gị ka ị na-ekiri / na-azụ anụ / na-amachi anụmanụ anyị niile site na obere oke bekee ruo nwa ehi ọkara na nnukwu ehi / ịnyịnya. Ndị ezinụlọ Borg na -anabata gị
Hotel nkwari akụ Winn Haninge
Emezigharịrị ụlọ nkwari akụ ọhụrụ ahụ Winn Haninge ma mepee ya na nso nso a dị ka ọnwa Febụwarị 2017. Ọ ga -amasị anyị ịnabata gị n'ụlọ nkwari akụ Sweden nwere ike ịnweta yana ime ụlọ ime obodo Haninge! Will ga -ahụ anyị n'etiti etiti Haninge, naanị nkeji iri abụọ site n'ụgbọ okporo ígwè na -aga Stockholm C, nkeji iri site na Stockholm Fair na iji nkeji 20 gaa ọdụ ụgbọ oloko Handen. Ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ụlọ nkwari akụ 10 mara mma nke na -enyekwa ọnụ ụlọ maka nnukwu ezinụlọ. Mụ na gị, ị nwere ike ịnọrọ ihe ruru mmadụ isii n'ime ụlọ ụfọdụ, nke zuru oke maka ndị otu egwuregwu. Nabata mgbe ọ bụla masịrị gị!
N'etiti Södertörn mara mma bụ Fors Gård malitere site na Viking Age. Anyị na -emeghe ụlọ akwụkwọ ịnya ụgbọ elu, ịnya ụgbọ elu na nkuzi nkeonwe na ịnyịnya Icelandic anyị, yana maka ndị na -agba ịnyịnya nwere ahụmihe mmụta na ịnyịnya Lusitano anyị. Anyị na-ahazi ọgbakọ, mgbapụ na oriri agbamakwụkwọ nwere njikọ ịnyịnya dịka ọchịchọ si dị. Ugbo ahụ nwere ọtụtụ ụlọ akụkọ ihe mere eme. Nkume ochie na -emegide rapids nwekwara ịwa ahụ na ndị na -arụ ọrụ ugbo na -ebi n'ime ihe ochie ochie. Nabata ịkpọ 08-500 107 89 ma ọ bụ zitere anyị email na bokningen.forsgard@telia.com
Ugbo ezinụlọ dị ndụ, 1km n'ime Gålö. Anyị nwere ihe dị ka mmiri ara ehi iri anọ na ihe dị ka ụmụ anụmanụ iri asatọ na -edobe ọmarịcha ebe ịta nri nke osisi oak. Agwaetiti dị na nnukwu agwaetiti Stockholm. N'oge oge ọkọchị, anyị nwere kọfị kọfị, ebe a na -eme achịcha na ebe a na -ere nri. Nọdụ ala na mbara ala anyị ma nwee ọ enjoyụ n'ọhịa na osisi oak. Anyị chọrọ ka ị nwee mmetụta nke ezinụlọ ma nwee olile anya na ọ na -atọ ụtọ nke ọma na nri ụlọ anyị na ezigbo achịcha kọfị anyị.
Nåttarö nwere nnukwu agwaetiti kacha ibu na agwaetiti kacha mma. Nnukwu aja bụ osimiri ama ama mana ọ dịkwa mma na Skarsand amabeghị. Agwaetiti a niile bụ nchekwa okike, ị nwere ike ịkụ azụ, kayak ma ọ bụ ịga n'oké ọhịa anwansi wee chọpụta ebe nlegharị anya dịka Cave Queen. Enwekwara ụzọ igwu mmiri nke nwere akara n'okpuru mmiri gbasara ndụ mmiri n'okpuru. N'ebe dị anya n'ebe ugwu bụ ugwu kachasị elu nke agwaetiti ahụ, Bötsudden, nwere ọmarịcha echiche. Na Nåttarö enwere ụlọ mbikọ, ụlọ nri, obere ụlọ, saịtị ụlọ ahịa na ụlọ ahịa obodo. Ị nweta ebe a site Waxholmsbåt si Nynäshamn.
Almåsa, Brandbergen Bio Cosmopolite, Dalarö, Fjärdlång Nature Reserve, Gålö Nature Reserve, Haninge C, Huvudskärsarkipelagen, Häringe nnukwu ụlọ, Jordbro, Kymendö, Muskö, Nåttarö, Ornö, Rånö, Sandemar National Reserve, Smådala National Park, National Park ogige, Ålö, Årsta Castle, Öster- na Västerhaninge
Copyright © 2022 UX Gburugburu
Användarnamn ma ọ bụ e-postadress *
A ga -eziga paswọọdụ na adreesị email gị.
A ga -eji ozi nkeonwe gị iji melite ahụmịhe gị na webụsaịtị, jikwaa ịnweta akaụntụ gị yana maka ebumnuche ndị ọzọ akọwara n'ime anyị amụma nzuzo.